सरकारी विद्यालयमा ४० नाघेका शिक्षक! | Nagarik News - Nepal Republic Media
सरकारी विद्यालयमा ४० नाघेका शिक्षक!
सरकारी निकायमा जागिरको उमेर ४० वर्षसम्म कायम गरिएको छ। प्राविधिक सेवा र महिलाले ४० वर्षसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सक्छन् भने अन्यको हकमा ३५ वर्षको उमेर हदबन्दी तोकिएको छ। तर काठमाडौं महानगरपालिकाले हालै कार्यन्वयनमा ल्याएको स्थानीय पाठ्यक्रमको नेपालभाषाको लागि सरकारी विद्यालयहरुमा ४० वर्ष उमेर नाघेका शिक्षकहरु नियुक्ति गरेको छ।
महागरपालिकाले दुई वर्ष अघि नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा १–८ सम्मका बालबालिकाहरुकोलागि अनिवार्य विषयको रुपमा सय पूर्णाकको नेपाल भाषाको पठनपाठन सुरु गरेको छ। जसकोलागि गत वर्ष महानगर शिक्षा विभागले करार शिक्षाको दरबन्दी सृजना गरी एक सय ७२ शिक्षकहरु नियुक्ति गरेको थियो। जसमा अधिकाँस शिक्षकहरुको उमेर ४० वर्ष नाघेको पाइएको छ।
ज्ञानेश्वरमा रहेको ज्ञानविकास आधारभूत विद्यालयमा कक्षा १–८ सम्म एक सय ५ विद्यार्थी छन्। महानगरपालिकाले गत वर्ष नेपाल भाषाकोलागि एक शिक्षक करार दरबन्दीमा दिएको छ। तर शिक्षको उमेर ५२ वर्ष भन्दा बढी भएपछि स्कुलकी प्रअ रमादेवी थापाले काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागमा उजुरीनै गरिन्। ‘शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर ४० वर्ष हो। तर मेरो स्कुलमा ५२ वर्ष माथिका शिक्षक करार दरबन्दीमा महानगरले उपलब्ध गराएपछि मैले उजुरी गरे तर सुनुवाइ भएन ,’ प्रअ थापाले नागरिकसँग भनिन्‘फ्रस्ट इम्प्रेसननै राम्रो भएन।
साना नानीहरुलाई खेलाई र रमाइलो गरि सिकाउनुकोलागि ४० वर्ष मुनिकै शिक्षक चाहिन्छ। घुलमलि हुन सहज हुन्छ। ’ उनी थप्निछन् ‘अब ति शिक्षकले विस्तारै पढाउनु नै भएको छ। तर एक्लैले ८ पिरियड पढाउन मुस्किलनै छ। त्यही भएर मैले एक युवा महिला शिक्षकको माग गरेकि छु।’ त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयमा महानगरले कक्षा १–८ सम्म नौ सय विद्यार्थीकोलागि नेपाल भाषा पठानपाठन गराउन चार शिक्षक नियु्िरक्त दिएको छ। करार दरबन्दी सृजना गरी नियुक्ति गरिएको चार शिक्षक मध्ये दुई जना ४० वर्ष उमेर पार गरेका छन्।
‘सरकारी विद्यालयका शिक्षक प्रवेशको उमेर हदबन्दी ४० वर्ष हो,’ विश्वनिकेतनका प्रअ हेरम्बराज कँडेलले भने ‘तर हाम्रो विद्यालयमा दुई शिक्षकहरु ४० वर्ष भन्दा माथिका हुुनुहुन्छ। महानगरलेनै नियुक्ति गरि उपलब्ध गराएको हो।’ उनले थपे ‘भाषा सम्बन्धी पठनपाठन गराउने भएकोले महानगरले उमेरलाई ख्याल नगरेको हुनसक्छ।’ उता महानगर शिक्षा विभागका उपसचिव मातिराज खनालले महानगर सभाले पारित गरेको नेपाल भाषा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिमा नेपाल भाषाकोलागि शैक्षिक योग्यता एसइई पास र नोपाल भाषा शिक्षण गर्न सक्ने मापदन्ड बनायो। तर उमेर हदको खासै वास्ता नगरेको जनाए।
‘महानगर शिक्षा विभागले महानगरभित्रका ८८ विद्यालयकालागि एक सय ७२ प्रशिक्षण सहायकको करार दरबन्दी सृजना गरी आवेदन माग गरेको थियो। भाषालाई प्राथमिकता दिएको हो,’ उपसचिव खनालले नागरिकसँग भने ‘विद्यालयमा पढाएर अनुभव भएका नेपाल भाषा शिक्षण गराउन सक्ने भएमा ४० वर्ष माथिलाई पनि नियुक्ति दिने निर्णय भए अनुसारै नियुक्ति गरिएको हो। ’उनले थपे‘ ५ सय ९ निजी विद्यालयकोलागि पनि हालसम्म तीन सय ६० प्रशिक्षण सहायकलाई महानगरको खर्चमा तालिम दिइसकेको छ। भने थप तालिमको व्यवस्था हुदै छ।’
प्रकाशित: १० कार्तिक २०७८ १७:४७ बुधबार
सरकारी निकायमा जागिरको उमेर ४० वर्ष काठमाडौं महानगरपालिका